Ngoobani Abaphulaphuli Bokwenene? | Martech Zone
Ngoobani Abaphulaphuli Bokwenene?
NgoMvulo, Aprili 5, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Njengoko ubhala umxholo wakho okanye ungena kwiincoko ngemithombo yeendaba zentlalo, ngaba uyazi ukuba ngubani onokuba ufunda, ujonge kwaye athathele ingqalelo? Uninzi lweebhlog zebumbano kunye ne-personas endiyibona kwimithombo yeendaba zentlalo icacile, kodwa mhlawumbi kancinci kakhulu ngaphambili.
Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba abaphulaphuli abaphambili ayingabo bonke abaphulaphuli abakwi-Intanethi. Abaphulaphuli bakho abaphambili banokunxibelelana nawe kwaye babambe incoko nawe yonke imihla - kodwa bambalwa. Abaphulaphuli bakho abangabonakaliyo, abangabonakaliyo ngokwenene baninzi. Bafunda ngokuzolileyo, bethatha amanqaku kwaye bagweba ukuba bayaya phambili okanye hayi.
Abaphulaphuli bakho banokuba
Inkampani elandelayo okanye usomashishini ovavanya ukuba uza kukuqesha okanye hayi.
Iingcali zeshishini ezichonga ukuba uyinkokeli okanye hayi.
Iinkokheli zenkomfa zikulinganisa ngomlinganiso wokuthetha.
Mhlawumbi umpapashi wencwadi ogqiba ukuba umxholo wakho unokuba yimathiriyeli yencwadi.
Umphathi wakho kunye nabantu osebenza nabo.
Abahlobo bakho kunye nosapho.
Umntu onomdla onomdla kwimveliso nakwiinkonzo zakho.
Umbono womqeshwa okanye iqabane kwishishini.
Nguwuphi umyalezo ozama ukunxibelelana nawo kwaba baphulaphuli? Ngaba unayo indlela yokuzibandakanya kuhlobo ngalunye lwabaphulaphuli? Ngaba uyazihlukanisa nabaphulaphuli abathile? Bendikwintambo ye-LinkedIn kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo xa imodareyitha ibeka elinye lamalungu esidlangalaleni. Ndayazi ke ukuba andizenzi nanini Ndifuna ukwenza ishishini kunye nemodareyitha. Mhlawumbi akazi nokuba uyayiqonda.
Yazi indawo okuyo, igama lakho kunye nabaphulaphuli bakho njengoko usenza inxaxheba. Unokuba uvale ngokungacacanga ukukhokela kwakho okulandelayo okanye utshabalalise ithuba lakho elilandelayo leshishini. Abaphulaphuli abaphambili ozibandakanya nabo ayingabo abaphulaphuli bokwenyani, ngabo kuphela abakwazisa ukuba bakho. Yeyona ungaziboniyo ekufuneka uyazi.
tags: abaphulaphuliidumelaabaphulaphuli beendaba ezentlalo
Imanifesto eNtsha yeMidiya
UGoogle ubulale inkwenkwezi yeGoogle Analytics